Xilka-qaadis iyo Isku-shaandheyn laga filayo RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Xilka-qaadis iyo Isku-shaandheyn laga filayo RW Rooble
Ilo-wareedyo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa KON u xaqiijiyay dagaalka RW Rooble iyo Madaxweynaha-xilku-ka-dhamaaday uu gaaray “meel aan kasoo noqosho laheyn.
Muqdisho – September 8, 2021: Xukuumadda RW Rooble ayaa la filayaa in ay maalmaha soo socda ku dhawaaqdo isku-shaandheyn iyo xilka-qaadis lagu sameynayo golaha wasiiradda, taas oo la aaminsan yahay in ay salka ku heyso xurgufta siyaasadeed ee u dhaxeysa labada mas’uul ee ugu sareysa dowladda Federaalka.
Ilo-wareedyo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa KON u xaqiijiyay dagaalka RW Rooble iyo Madaxweynaha-xilku-ka-dhamaaday uu gaaray “meel aan kasoo noqosho laheyn.”
RW Rooble ayaa ku adkeystay mowqifkiisii xilka-qaadista Fahad Yasin, oo ah ninka la tuhunsan yahay in uu ka dambeeyay dilkii Ikraan Tahliil, oo aheyd xubin ka mid ah hay’adda Sirdoonka ee NISA. Arrintan ayaa imaaneysa kadib waanwaan fashilantay oo ay wadeen ragga ku dhowdhow Farmaajo, kuwaas oo isku dayay in ay RW Rooble soo xero-galiyaan.
Fahad Yaasiin ayaa lagu waramayaa in uu wali ku sugan yahay dalka Turkiga, halkaas oo u joogay maalmihii lasoo dhaafay aroos. Mid ka mid ah dadka aadka ugu dhow Fahad Yaasiin oo Keydmedia lasoo xiriiray ayaa sheegay in ay soo wajahday cabsi iyo rajo-xumo maadaama “wixii uu kusoo tiir iyo tacab beelay uu RW Rooble ka dhigay hal-bacaad lagu lisay” ayuu yiri Fahad saaxiibkii.
“In muddo ah, Fahad wuxuu ku taamayay in wax walba sidii uu rabay ay ku socdaan; Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, Wasiiro federal ah oo dhamaantood uu isagu magacowday, rajadiisuna aheyd in uu uga faa’iideysto Doorashada 2021, ayaa halmar meesha ka baxay” ayuu yiri shaqsi kale oo xog-ogaal ah oo KON uga waramay xaaladda cakiran ee soo wajahday Fahad. “Rooble wuxuu aad uga feejigan yahay qiyaanada Fahad, Fahadna wuxuu aaminsan yahay in Rooble uu garanayo halka uu u nugul yahay hadii foodda la is daro.”
Dad badan ayaa aaminsan in RW Rooble uu soo afjari karo dagaalka Farmaajo hadii uu xilka ka ceyriyo xulafadiisa inta ku jirta Golaha Wasiiradda. Taas waxay abuuri kartaa in rajada Farmaajo ee dibu-soo-noqoshada ay meesha ka baxdo. Sidoo kale, RW Rooble wuxuu cadaadis saari karaa dowladaha maamul-goboleedyada saddexda ah, kuwaas oo la-heystaal u ahaa Fahad Yaasiin.
Waxaa hubaal ah in RW Rooble uu taageero iyo karaamo ku helay mowqifka adag ee uu ka istaagay arrinta Fahad iyo kiiska gabadhii yareyd ee Ikraan Tahliil, oo dad badan ay aaminsan yihiin in ay ku maqan tahay gacanta Fahad Yaasiin. Beesha Caalamka ayaa sidoo kale ku cadeysay war-saxaafadeedkii shalay in ay garab-taagan yihiin Xukuumadda gaar ahaan dhameystirka arrimaha doorashada iyo in xukuumadda ay cadaalad u hesho qoyska Ikraan Tahliil, sharcigana la beegsato qoladii ka dambeysay.
Inkasta oo aan la ogeyn cidda ay sida gaarka ah u saameyn doonto xilka-qaadista ama isku shaandheynta la filayo, hadana dadka odorasa siyaasadda Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dhowr wasiir ay seeftu qaadi doonto, kuwaas oo kala ah; Wasiirka Maaliyadda, Wasiirka Amniga, Wasiirka Arrimah Gudaha iyo Federaalka, Wasiirka Qorsheynta, Wasiirka Kalluumeysiga iyo Wasiirka Beeraha, oo dhamaantood lagu sheegay in ay aad ugu dhow yihiin Farmaajo iyo Fahad.